गर्मीको बिचमा बिचरा शरद ऋतुको बीचमा, सबै मालिकहरू भ्रामक तर धेरै महत्त्वपूर्ण समय छन् - यो विभिन्न समय, कम्पोज्टन, जाम, मर्मलड्रेड, मल र कर्करहरू र टमाटरहरू रोकिने र तयार पार्ने पोशाक र सिजनहरू तयार गर्ने समय हो कि यो सम्पूर्ण सर्दी सीजन यसको उज्ज्वल स्वादको साथ, शरीरमा भिटामिन गर्ने एकै समयमा र यसको प्रतिरक्षा बलियो हुन्छ।
यी ग्याँस स्टेशनहरूमध्ये "Ogonyok।" उनको नुस्खा पारंपरिक अब्खेजियन डिश - adzhika को समान छ। तथापि, यो लसुन र तातो काली मिर्चको बहुतायतको कारण अत्यधिक तीव्रता र पिचको साथ यसको फरक हुन्छ। केही गोठालोले पानीको साथ वा गरम सूपको साथ बिगार्न सकेन, त्यस्ता सिजनका साथ तेलको रोटीमा पनि सानो टुक्रा रोटीको सामना गर्न सक्छ, र यसैले प्रायः मासु, माछा, सब्जिहरु वा पास्ता बाट तयार बनाइएको भाँडामा सेवा गरिन्छ। "Ogonek," जो कि तीव्रता को लागि नुस्खा सर्दियों को लागि सबै अन्य खाली छ, शायद तैयार को रूप मा यो कल्पना हुन सक्छ को रूप मा तैयार छैन। यसलाई सँगै गर्ने प्रयास गरौं।
यसको परम्परागत अवयवहरू टमाटरहरू छन् (एक किलोग्राम पर्याप्त), घोडामालाश (300 ग्राम), लसुन (आधा-अनुहार, अर्थात् 10 ग्राम।), काली मिर्चको आधा एक पोड (प्रेमीहरू एकदम एक हुन सक्छ), एक चम्मचको चम्मच र नमक, साथ साथै सब्जीको तेल र तालिका सिरका को आधा एक चम्मच (चिया)।
तपाईं अर्को सानो र बैग्नर थप्न सक्नुहुनेछ। "Ogonek", जसको नुस्खा, निस्सन्देह, तिनीहरूलाई समावेश गर्दैन, सधै रचनात्मक सुधार गर्न सकिन्छ, उनीहरूको विचार र व्यक्तिगत स्वाद प्राथमिकताहरू प्रयोग गरेर। यसको अतिरिक्त, यदि तपाईले अन्य सामग्रीहरू नुस्खामा थप गर्नुभयो भने, यो कम जलिरहेको छ र अधिक सट्टा हुन्छ। जस्तै हामीले पहिले उल्लेख गरेका छौं, अब्ख्जीहरूसँग धेरै समान व्यञ्जन छ। "Ogonyok" (यसको नुस्खा उत्पादनहरु को एक सरल सेट र कम piquancy द्वारा प्रतिष्ठित छ) सोवियतहरु पछि पोस्ट को क्षेत्र मा अधिक सामान्य छ। तर आद्जाका कोकेशस पर्वतमा बस्ने विटिकावादको प्रेमीहरूको परम्परागत पुनरुत्थान हो । यो टमाटरको आधारमा तयार छ, तर त्यहाँ सेबहरू र बुल्गारिया काली मिर्चहरू पनि छन्। यसको कारणले गर्दा यो एक विशेषता मिठो-स्वाद स्वाद प्राप्त गर्दछ, जुन जलविद्युतको उत्थानसँग जोडिएको छ, यसले स्वादको स्वाद र सुन्दरतालाई सुन्दर बनाउँदछ, जसले यसको अयोग्य लोकप्रियताको कारण दिन्छ।
"Ogonek", यो नुस्खा उन मान्छे को लागि उपयुक्त छ जो तेज workpieces जस्तै र रसोईघर मा लामो समय सम्म को लागि परेशान नहीं गर्छन, तीन चरणहरु मा तैयारी गर्दछ। पहिलो तैयारी हो, सामग्री को सफाई। काली मिर्च, घोडा र घोडाबाट र प्याकोडेलबाट टमाटरहरूबाट सेतोबाट काली मिर्च जारी गरिन्छ। दोस्रो चरणमा हामी तालिकामा म्यानुअल माटोको चक्कीलाई जोड्दछौं र यसलाई ठूलो टुक्रा घोडामालाश, लसुन र काली मिर्चमा काट्न अनुमति दिन्छौं। अनि त्यसपछि एउटै बर्तनमा हामीले टमाटरहरू स्क्रोल गर्यौ र फेरि हामी सबैलाई ब्लेंडरको साथ पीसौं। तेस्रो चरणमा, यो आवश्यक कच्चा पदार्थ भर्खरै आवश्यक छ , चीनी, नमक, सिरका जोडेर फेरि मिश्रण गर्न आवश्यक छ। नतिजा "आगो" राख्नुहोस्, नुस्खाले भर्खरै कदमद्वारा कदम वर्णन गरेको थियो, ठिक कोठामा, यसलाई टासेरेराइज्ड जारमा पूर्व-रोल हुनुपर्छ र हरेक चम्मचको सुत्केरीको तेल थप गर्नुहोस्।
स्टाइड्ड गोभीको साथ पाई: व्यञ्जनहरु
कसरी "Vupi Pai" (केक) पकाउने?
ओज्जखौरी जर्जियाको लागि एक नुस्खा हो। पान मा पकाएँ
कसरी asparagus को लागि एक चटनी को चयन: हरेक स्वाद को लागि एक नुस्खा
सबै भन्दा ठूलो झरना, अफ्रीका मा एक नदी
Disinfectants र antiseptics
कागज बनेको चरा कसरी बनाउने? आनन्द क्रेन